हत्या गरिएकी महिलाको शरीर पोस्टमार्टमका लागि लैजान लाग्दा उल्टियो सबथोक (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
हत्या गरिएकी महिलाको शरीर पोस्टमार्टमका लागि लैजान लाग्दा उल्टियो सबथोक (भिडियो)
केली। कोलम्बियामा एक महिलालाई दिनदहाडै सडकमा गोली हानियो । मानिसहरुले उनको हत्याबारे पुलिसलाई खबर गरे । पुलिस आउँदासम्म घण्टौं शरीर सडकमै रह्यो । केही घण्टापछि पुलिस आयो र घटनास्थलमा रहेका सबुत प्रमाण र सुरागहरु जुटाउन थाल्यो । सबै साक्षीहरु जुटाइसकेपछि महिलाको शरीरलाई पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल पठाउने तयारी हुँदै थियो यत्तिकैमा अचानक यस्तो घटना भयो कि सबथोक उल्टियो ।
घटना कोलम्बियाको केली शहरको हो । यहाँ ३३ वर्षकी केरमन एन्ड्रा केंडेज नामकी महिलालाई कसैले दिनदहाडै बीच सडकमा गोली हानिदियो । गोली लागेर ढलेकी महिलाको शरीरमा कुनै हलचल थिएन । त्यसपछि स्थानीयले पुलिस बोलाए । पुलिसलाई लाग्यो उनको मृत्यु भइसकेको छ । त्यसैले पुलिसले आसपासका सुरागहरु जुटाउन थाल्यो । पुलिस घटनास्थल पुग्दासम्म उनको शरीर सडकमै थियो ।
एक पुलिस अफिसरले उनको शरीरको अवस्थिति दर्शाउनका लागि मार्कर लगाउँदै थिए यत्तिकैमा उनलाई लाग्यो कि महिलाको हात हल्लिरहेको छ । पहिले त उनलाई लाग्यो कि यो भ्रम हो तर पुनः अर्को पटक हात हल्लिएपछि भने उनले बुझे कि महिला जीवित छिन् । घटना त्यहाँको पुलिस कारवाहीको भिडियो बनाइरहेका एक व्यक्तिको क्यामेरामा रेकर्ड भयो ।
स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी नेल्सन सिनिस्टेराका अनुसार महिलालाई तत्काल अस्पताल लगियो । डाक्टरले अहिले महिलाको हालत स्थिर भएको बताएका छन् । महिला खतरामुक्त भएको बताइएको छ । पुलिस यो घटनाको जाँच गरिरहेको छ । पुलिसलाई अब महिला ठिक हुने प्रतिक्षा छ ताकि उनीसँग सोधेर आरोपीको बारेमा केही जानकारी पाउन सकियोस् । हेर्नुहोस् भिडियो –